လှုပ်ရှားခြင်းသည် တိုက်စစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စစ်အာဏာရှင်နှင့် သူ၏ဒေါက်တိုင်များအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နာကျင်စေခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ အထူးတားမြစ်ထားသည်။ရန်သူ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာ၊လူမှုရေးဆိုင်ရာ၊နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာနှင့်သူ၏ယန္တရားဆိုင်ရာတို့အား အင်အားချိနဲ့စေခြင်း။ ပြိုကွဲစေခြင်း။ ရပ်ဆိုင်းသွားစေခြင်း(သို့မဟုတ်)မိမိဘက်ပါအောင်ဆွဲဆောင်ခြင်းဟူသော သိမ်မွေ့သည့် လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုသာဆိုလိုဖြင်းဖြစ်သည်။
လှုပ်ရှားမှုတိုင်းသည်လည်းပုံသေမဟုတ်။မဟာဗျူဟာအရ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ် ရပေသည်။မိမိဒေသ၏လူ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အချိန်ကာလကို ကိုယ်တိုင်အကဲဖြတ်နိုင်ရန်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ ပြောင်းလဲရန်နည်းနာတွေများစွာကိုလည်းထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားပေသည်။မိမိ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တခုလွဲချော်ဖြင်းဖြင့် မိမိရန်သူ၏သြဇာအာဏာကိုပို၍ကြီးထွားစေ နိုင်ကြောင်းကိုလည်း ဤဘာသာရပ်တွင်တွေ့ရပေမည်။
လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည့်ပုံရိပ်တွေအမြောက်အများကိုတွေမြင်နိုင်ပေသည်။မြေပေါ်နည်းသည် မိမိဘယ်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြည်သူ့
အကျိုးပြုလုပ်ငန်းဘာတွေကိုလုပ်ဆောင်နေကြောင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထုတ်ဖေါ်ပြောဆို၍ ဇွဲသတ္တိရှိရှိဖြင့်ချီတက်နေကြသောနည်းနာဖြစ်
သည်။မြေအောက်နည်းဆိုတာကတော့ မိမိဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်သည်ကို ဘယ်သူကိုမှမသိစေဘဲ မိမိ၏လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အရ ဤအကြမ်းမဖက်သော(မြေအောက်)နည်းလမ်းသည် မရှိမဖြစ်အရေးတ
ကြီးလိုအပ်လျှက်ရှိကြောင်းကို ကျနော်၏အတွေ့အမြင် ဗဟုသုတ တွေနှင့် ဂျင်းရှပ်၏ Nonviolent Struggle တွေကိုပေါင်းစပ်
သည် တခါသုံးပစ္စည်းမဟုတ်။လက်နက်ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေလို ၀ယ်ယူလို့လည်းမရပါ။
ထိုနည်းနာ၏သဘောမနောတို့အား ချင့်ချိန်နှိုင်ရန်အတွက် ‘1929 နှစ်အတွင်းက အိန္ဒြိယနိုင်ငံလုံးဝလွတ်မြောက်ရေး
ကြွေးကြော်သံအောက်မှ ပုံရိပ်တခုကိုလေ့လာကြည့်သင့်ပါသည်။ အကြမ်းမဖက်သောတော်လှန်ရေးသမားတဦးဖြစ်၇န် လိုက်
ငါသည် Khudai Khidmatgers (Servants of God) အဖွဲ့ဝင်သစ်ဖြစ်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏မျက်နှာတော်
ရှေ့မှောက်၌ အောက်ပါ ကတိသစ္စာတို့အား လေးလေးနက်နက်အခိုင်အမာ ဂတိသစ္စာပြုပါ၏
Before getting accepted into the Khudai khidmatgars the new recruits had to take the following pledge,
1*I hereby honestly and sincerely offer myself for enrollment as Khudai Khidmatgar.
ငါသည် Khudai Khidmatgar ကဲ့သို့သော အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ရန်အတွက် ငါ၏အသက်နှင့်ခန္ဓာအား လှူဒါန်းပါ၏။
2*I shall be ever ready to sacrifice personal comfort,property and even life itself to serve the nat-
ion and for the attainment of my country’s freedom.
ငါသည် ငါ့တိုင်းပြည်နှင့်ငါ့လူမျိုး၏လွတ်လပ်မှု ရရှီရေးအတွက် ဥစ္စာစည်းစိမ်သာမကအသက်ကိုပင်လျှင်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံ
3*I shall not participate in factions, nor pick upaquarrel with or bear enmity towards anybody.
I shall always protect the oppressed against the tyranny of the oppressor.
ငါသည် ဂိုင်းဂဏခွဲခြင်းအကျင့်မှရှောင်ကျဉ်ယုံသာမက မည်သူတဦးတယောက်နှင့်မျှ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးခြင်းအငြိုးအတေးထား
4*I shall not becomeamember of any other organization and shall not furnish security or tender
apology in the course of the nonviolent struggle.
5*I shall always obey every legitimate order of my superior officer.
6*I shall always live up to the principle of nonviolence.
ငါသည် အကြမ်းမဖက်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အမြဲနေထိုင်ကျင့်သုံးပါမည်။
7*I shall serve all humanity equally.The chief object of my life shall be attainment of complete
Independence for my country and my religion.
ငါသည် အားလုံးသောလူသားကျင့်ဝတ်နှင့်အညီတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမည်။ငါ့ဘ၀၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ငါ့တိုင်း
ပြည်နှင့်ငါ့ဘာသာ ငါ့သာသနာအတွက် လုံးဝလွတ်လပ်ရေးရရှိ၇န်ဖြစ်ရပါမည်။
8* I shall always observe truth and purity in all actions.
ငါသည် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် ဖြူစင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အမြဲဦးထိပ်ပန်ဆင်ထားပါမည်။
9*I shall expect no remuneration for my services.
ငါ၏စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုအတွက် မည်သည့် ဆုလာဒ်အခငွေကြေးကိုမျှ မျှော်လင့်လိမ့်မည်မဟုတ်။
10*All my services shall be dedicated to God they shall not be for attaining rank or for show.
ငါ၏စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကျပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ရာထူးအဆင့်အတန်း
ရရှိရေး သို့မဟုတ် ၀င့်ကြွားရေးအတွက် မဖြစ်စေရပါ။
မှတ်ချက် (ဘာသာပြန်ဆိုမှုကို ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်)
Posted by Mo Myintlin at 7:33 AM